Somaliland oo u digtay xubnaha beesha caalamka ee Muqdisho amarna dul dhigtay - Caasimada Online
Home Somaliland Somaliland oo u digtay xubnaha beesha caalamka ee Muqdisho amarna dul dhigtay
Somaliland oo u digtay xubnaha beesha caalamka ee Muqdisho amarna dul dhigtay
Hargeysa (Caasimada Online) ― Kalfadhigii maanta ee Golaha Wasiirada Somaliland oo uu shir gudoominayey Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, ayaa waxa lagaga dooday isla markaana lagu ansixiyey xeerka siyaasada qaran ee maalgashiga.
Kalfadhigan ayaa sidoo kale waxa lagaga hadlay xidhiidhka wada shaqayneed ee dalalka Caalamka iyo Hay’adaha, kaasi oo lagu go’aamiyey in Beesha caalamka iyo Hay’adahaasiba ay Somaliland ula dhaqmaan si dal madax banaan.
Golaha ayaa sheegay in loo baahan yahay in Safiirrada iyo ergooyinka ka socda waddamada caalamka, madaxda ururrada caalamiga ah iyo hay’adaha ka hawlgala gudaha Somaliland ay dhawraan Qarannimada Somaliland kuna shaqeeyaan xeerarka iyo qawaaniinta Somaliland.
Golaha ayaa sidoo kale waxa ka digay in Beesha caalamku ay ku xad-gudubto xuduudda dhuleed Somaliland, isla markaana ay mashaariicdooda u isticmaalaan magaca, khariiradda, astaanta iyo calanka Somaliland leedahay ee gaarka u ah, sida lagu sheegay War-saxafadeed ay Madaxtooyada Somaliland ka soo saartay Kalfadhiga Golahaasi.
Hoos ka aqriso War-saxafadeed ay Madaxtooyadu ka soo saartay Kalfadhigaasi:
“Fadhigii 51-aad ee golaha wasiirrada Jamhuuriyadda Somaliland oo uu shir-guddoominayey Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi, kuna wehelinaayey Madaxweyne-ku-xigeenka Somaliland, Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici), ayaa maanta lagaga dooday laguna ansixiyey xeerar kala duwan.
Golaha wasiirradu waxay dood dheer ka dib ansixiyeen siyaasadda qaran ee maalgashiga, sidoo kale waxa golaha loo qaybiyey nuqullada qabyo qoraalka xeerka maalgashiga, waxaana golaha sharaxaad ka siiyey wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga iyo garyaqaanka guud ee qaranka.
Dhinaca kale, waxa golaha wasiirrada Jamhuuriyadda Somaliland, waxay mar kale ku celilyeen go’aanka Jamhuuriyadda Somaliland ee xidhiidhka wada shaqayneed ee dalalka caalamka iyo hay’aduhu inuu yahay in beesha caalamku ay Somaliland ula dhaqanto dal madax-bannaan oo aan qayb ka ahayn Soomaaliya.
Sidaa awgeed, waa in Safiirrada iyo ergooyinka ka socda waddamada caalamka, madaxda ururrada caalamiga ah iyo hay’adaha ka hawlgala gudaha Jamhuuriyadda Somaliland ay dhawraan Qarannimada Somaliland kuna shaqeeyaan xeerarka iyo qawaaniinta Somaliland, waana in aanay ku xadgudbin xuduudaha dhuleed, cireed iyo baddeed ee Jamhuuriyadda Somaliland.
Dhammaan qoraalada (documents) mashaariicaha ay hay’aduhu ka fulinayaan Somaliland waa in ay u isticmaalaan magaca, khariiradda, astaanta iyo calanka Somaliland leedahay ee gaarka u ah.
Waxa reebban inaan dalka Jamhuuriyadda Somaliland laga fulin Karin mashaariic aan heshiiskooda lala gelin dalka Somaliland, sidoo kale cidna ma fulin karto mashaariic aan oggolaanshahooda laga haysan hay’adda dawladdeed ee ay khusayso”.